Yako Organic Chinzvimbo Chinhu? | Martech Zone
Yako Organic Chinzvimbo Chinhu?
Chitatu, December 28, 2011 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Nguva yekuti ini ndigumbure vamwe SEO minhenga zvakare! Nhasi ndafunga kurodha matsamba angu kubva kuGoogle Tsvaga Console uye ndonyatso kuchera pane traffic yandiri kuwana kubva ku organic search. Martech Zone chinzvimbo chinoshamisa kwazvo pane akati wandei mazwi akakosha ane gumi nematanhatu e # 1 makwikwi pakakwikwidza kwakanyanya, yakakwira vhoriyamu mazwi. Isu tese tinoziva kuti iyo kukwirisa chinzvimbo, iko kukwirisa mwero-wekudzvanya pane peji rekutsvaga injini peji. Asi izvozvo zvine basa here mumufananidzo mukuru?
Usatorere yako yakazara organic yekutsvaga traffic kubva kumazwi akakosha iwe ausina kana kana ane mashoma ekutsvaga mavhoriyamu. Pane yedu kushambadzira blog, 72% yemagetsi edu traffic anouya kubva muzvinyorwa zviri izvo kwete kunyangwe papeji 1! Zvinotonyanya kufadza ndezvekuti isu tinowana yakawanda traffic kubva kune chinhanho chegumi kupfuura isu zvatinoita pachinzvimbo che8!
Ini ndinoona izvi zvinonzwika sekumhura, asi iwe unofanirwa kunyatsofunga nezve izvi paunenge uchitarisa pane zvemukati zvekushambadzira zano. Zvakanyanya kukosha here kuisa mari pachinzvimbo chepamusoro vhoriyamu, zvakanyanya kukwikwidza mazwi akakosha? Izvi zvinogona kunge zvichikurumidza uye zvichidhura. Kana, iwe unogona here kuisa nguva mukuyedza mukupa zvakasiyana zvemukati pane akareba-muswe mazwi akakosha asiri iwo anokwikwidza asi anonyanya kukoshesa kusangano rako?
Kutaura chokwadi, isu takasarudza iyo yekupedzisira. Ndaiwanzofunga kuti chinzvimbo # 1 chakakosha pakubudirira kwedu. Asi ini kubvira ndazviona kuti kuisa simba rakawanda mune zvemukati zvemukati kwaiwana isu kutarisisa kwakawanda. Iwo ma stats haanyepe… nepo cheki-yekudzvanya padanho rekutsvaga injini inogona kuwedzera zvakanyanya paunosvika panzvimbo ye # 1, traffic yedu yakanangana nematanho haina basa zvakanyanya. Isu tinoziva kuti tinogona kupinda mumhedzisiro yakakura nezvakakura zvemukati ... wadii kungoshanda pane izvo uye nekuwedzera yedu organic traffic ine inoenderana, yemhando yezvinyorwa panzvimbo yekupfura kune bullseye nguva dzese?
Ita zvako wega ongororo yeako organic chinzvimbo. Ndekupi kwakawanda kwako motokari kubva? Kunyangwe mubvunzo uri nani, iripi yakawanda yako bhizimisi kubva? Kufungidzira kwangu ndekwekuti iri kuuya kubva kwakasiyana-siyana-refu muswe, akakodzera ekutsvaga. Ndiratidze kuti ndakanganisa! 🙂
Ini handisi kurasa zvachose chinzvimbo chepamusoro pamakwikwi zvakanyanya. Icho chiratidzo chikuru chechiremera uye chinogona kutyaira yakawanda traffic. Zvakare, chinzvimbo chepamusoro pane mamwe mazwi akakosha anoita kunge anoenderana nekumisikidza yakakwira pane akawanda akanangana nemazwi akakosha. Iko kusanganisa kunogona kutyaira tani yetraffic. Ndiri kungokurudzira nzira yakaenzana. Panzvimbo pekuyedza kutora homerun neese at-bat, zvakanaka nguva dzese kamwechete kwechinguva kungoedza uye kuwana pane base!
Kwidziridzo: Mushure mekugovana iyi posvo, ini ndakaona kuti handisi ndega ndakaona izvi Dzingisa Traffic, Kwete Maseru.
Tags: ctrchinzvimbo chegoogleGoogle +keyword chinzvimbomuswe wakarebalongtail keywordspagerankchepamusoronyoka
Zvita 28, 2011 na4:59 PM
Iyi yaive post yakanaka chaizvo Doug. Varume vanonyepa, Vakadzi vanonyepa, Nhamba havanyepi. Saka kubva kunhamba dzako, ndingati uri pairi - uye zvinotonyanya kukosha, makambani asiri-akatarisana nevatengi anofanirwa kufunga nzira iyi. Ndiri kuuya muhofisi mazuva mashoma svondo rinouya uye ndichishanda - ndingade kuchera zvakadzika pane izvi. ( PS: Ndine mavhiki maviri ekudzidza pateamtreehouse.com. Vamwe vakasarudza kudzidza kunyora kodhi yavo pachavo. Rega VaColey vazive! Achawana mukana kubva mazviri! HA
Chiremera uye kukanganisa pamazwi akakosha akakosha. Rangarira kuti Google Webmaster Zvishandiso zvinongoratidza chikamu cheyero (1,000 keywords).
Zvita 29, 2011 na7:39 PM
Saka izvi zvirimo zvine adwords akabatana nazvo here? Mune mamwe mazwi wanga uchibhadharwa traffic kubva kune adwords uye iyo organic rondedzero yaionekwa. Ini ndinofunga adwords inoita zvirinani kana yavo inoenderana organic rondedzero ichioneka. Tichipihwa sarudzo vanhu vanozodzvanya iyo premium wedzera (kana imwe yacho ichionekwa) izvi zvinoita kuti adwords ive iyo traffic sosi uye manhamba anozopenda organic seanotaridzika asina kukosha asi chokwadi ndechekuti CTR ingadai yakadzikira pasina izvo organic kuiswa.
Pfungwa huru inokurudzira post.
Zvita 29, 2011 na7:49 PM
@ktatgenhorst:disqus Kwete, isu hatiite chero yekutsvaga yakabhadharwa kuti tiwane traffic.
Zvita 30, 2011 na2:52 PM
Doug, zano rako rekupedzisira, kudzingirira traffic, kwete masaiti ndizvo chaizvo izvo zvisingawanikwe nevanhu vazhinji. Dzimwe nguva ndinofunga imhaka yekuti masaisai ari nyore, traffic yakaoma uye shanduko, ingave ad kudzvanya, inotungamira kana kutengesa kwakatooma.
Mhoroi Doug, ndakafarira iyi positi asi ini ndanga ndine chekutaura nezve tsananguro yako yeSERP masanji echinyorwa ichi. Kana chinzvimbo chako chiri chekuti Google SERP personalization yaita kuti tsananguro yakajairika yeGoogle "chinzvimbo" ive isina basa, ndeipi tsanangudzo yenzvimbo yauri kushandisa pachidzidzo ichi? Mune mamwe mazwi, iwe uri kuita chirevo chekuti 72% yetraffic yako iri kuuya kubva kumazwi akakosha ausingatombo miririra pane 1st peji yeGoogle SERPs, asi kana munhu wese ari munhu, ndiani Google SERPs wauri kutaura nezvake? *Mumwe munhu* arikutsvaga bhurogi rako kune iwo mazwi akakosha, handiti? Uye mikana yekuti vari kutsvaga paPeji 2,3,4 nezvimwe zveGoogle SERPs yakaderera. Saka kwavari, URI chinzvimbo pane 1st peji, zvikasadaro vangasakuwana iwe muhuwandu hukuru hwauri kutaura nezvahwo.
Chaizvoizvo, handizvo Tod. Sezvinoratidzwa nechinyorwa, iyo yakawanda yekutsvaga traffic yandiri kuwana HAIYO kubva pakuiswa kwangu pane yekutanga peji. Pfungwa yangu haisi iyo chinzvimbo HAINA kukosha…. pfungwa yangu ndeyekuti RELEVANCE inonyanya kukosha THAN chinzvimbo. Kana iwe ukatarisisa zvemukati mako uye ukanyora zvakanaka zvemukati, vanhu vanokuwana iwe. Pasinei nechinzvimbo.
Isu tiri kuonawo izvi nevatengi vedu. Huwandu hwepamusoro, makiyi epamusoro ari kutyaira mamwe traffic asi kwete shanduko. Shanduko dziri kuuya kubva kumapeji akakosha uye zvakatumirwa kubva kure-muswe keywords anobva kuSERP kuiswa kunze kwekutanga peji. Zvekare, kukosha pane chinzvimbo.
Doug, chinyorwa chako chaive chakajeka kuti 72% yetraffic yako haisi kuuya kubva kumibvunzo yaumire paPeji 1 yeSERPs. Mubvunzo wangu wakatenderedza pfungwa ye "chinzvimbo" muzera reSERP personalization. 72% yako organic yekutsvaga traffic yakakuwana iwe ... neimwe nzira. Vari kukuwana sei kana usiri chinzvimbo paPeji 1 yemibvunzo iyoyo? Ko SERP personalization yasvika kure zvekuti Peji 1 yemunhu wese yakasiyana zvakanyanya?
Kusvika padanho… Vamwe vatengi vedu vari kuona hafu yekushanya kubva pakutsvaga kwemunhu. Asi uku hakusi kutsvaga kwemunhu… Iyi data yakabva kuWebmasters. Ava ndivo vanhu vari kudzvanya past page 1 vachitsvaga RELEVANT mhinduro.
Ndaigara ndiine pfungwa yekuti kana vanhu vasingawani zvavanoda paPeji 1, vanongobvunzazve, vachibvunza mubvunzo neimwe nzira, pane kuenda kuPeji 2. Ndizvo zvandaigara ndichinzwa uye mukati. chokwadi ndozvandinogara ndichiita. Kana zvauri kutaura chiri chokwadi, maitiro ekutsvaga kwevanhu ari kuchinja zvakanyanya.
Tod - ndiwo maitiro andinoita kutsvaga. Asi hazviregi kundishamisa kuti vamwe vanhu vanotsvaga sei. Semuenzaniso: Vazhinji, vazhinji, vanhu vazhinji vanonyora mitsara yese mumainjini ekutsvaga kwete kungoita mashoma mazwi. Takashanda nevatengi vedu kugadzira FAQs dzinotora matani ekutsvaga. Ndiani aiziva?!
Doug, ndinoda chaizvo chinyorwa. Mantra yangu yagara iri vatengi yekutanga zvemukati yechipiri. Kana zvirimo zvako zvichikwezva vatengi vako ivo vachagara vachikuwana.
Yakawanda yetraffic yangu inobva kune mbiru mbiru dzandakanyora makore apfuura. Muswe wakareba unondipa nguva dzose yekufamba kwetraffic zuva nezuva. Izwi rekuti "mbiru yembiru" rakamboshandiswa zvisina kunaka nekufamba kwenguva. Kana ini ndichiti "mbiru yembiru" ndinoreva kunyora yechokwadi yepakutanga yezvinyorwa zvinoenderana nesaiti yangu niche uye inozadza kudiwa chaiko kunharaunda. Kwete kungochera zvemukati sezvinoita vamwe. Kuve wekutanga kuzadza icho chinodiwa kwakasimbisa zvangu zvemukati neGoogebot semvumo pamusoro pechinyorwa.
Positi yakanaka Doug.
Ndatenda @blogbloke:disqus ! Nguva dzose zvakanaka kuwana rumbidzo kubva kune mumwe wemapiyona. 🙂